မနက်ခင်း နေမင်းနဲ့ အတူထွက်
တင်သွင်းလို့လည်ပတ်
Bell သံကြားရင် ... လုပ်
Bell သံကြားရင်.... နား
Bell သံကြားရင်..... စား
Bell သံကြားရင်..... သွား
Bell. သံတိတ်မှ .......အိမ်ပြန်
အိပ်တန်းဝင် ဌက်တွေနဲ့ အတူပေါ့
စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ ဆိုတာ
တနေ့ ၊ တပတ်၊ တလ ၊တနှစ်
အခုဆို (၂၀၁၃)ကိုရောက်ခဲ့ ပြီ။
ဟော..... Bell သံကြားရပြီ
မလှုပ်ချင်တဲ့ ငါ့ ခန္ဓာ
လေးလံတဲ့လက်
နှေးကွေးတဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ 
တကယ်တော့ ငါ နားသင့်ပြီ
တကယ်တော့ ငါ နားသင့်ပါပြီ
အင်း ! အခုတော့